Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny maimaimpoana amin'ny fanavaozana sary vetaveta-pandemena amin'ny Internet - Famaliana
Home News Blog Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny maimaimpoana amin'ny fanavaozana Internet-Pandemelina maimaimpoana
Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny maimaimpoana amin'ny fanavaozana Internet-Pandemelina maimaimpoana
adminaccount888 13 Janoary 2021 fanabeazana, fahasalamana, Vaovao farany
Ny fijerena ireo risika vetaveta
Aretina Spectrum Spectrum
Lahatsary fohy momba ny fiarovana ny ankizy
Rakitra fanadihadiana vaovao nateraky ny ray aman-dreny momba ny vokatry ny pôrnôgrafia amin'ny ankizy
Ampio amin'ireo resaka sarotra ireo
Torohevitra momba ny firesahana amin'ny ankizy
Torohevitra momba ny smartphone
Inona avy ny Apps mety hanampy?
Ny atidoha amin'ny pôrnôs
Avereno ny tadidin'ny zanakao
Boky ho an'ny ankizy kely kokoa
Loharanom-baovao an-tserasera maimaimpoana bebe kokoa ho an'ny ray aman-dreny
Tranonkala fanarenana ho an'ireo mpampiasa tanora
Ireo loharano fanarenana miorina amin'ny finoana
Fandrindrana ataon'ny governemanta
Fanohanana bebe kokoa avy amin'ny The Reward Reward Foundation
Alohan'ny hanombohanao ity fikarohana ity momba ireo loza mety hitranga manodidina ny pôrnôgrafia, dia aleo tadidintsika ny antony ilana izany. Tianay ny ankizy hitombo hanana fifandraisana akaiky sambatra, be fitiavana ary azo antoka. Jereo ity sary mahafinaritra, "inona no atao hoe fitia?" hampahatsiahy antsika ny endriny amin'ny fampiharana.
Amin'ny maha ray aman-dreny sy mpikarakara anao dia ianao no maodely lehibe indrindra sy loharanon'ny fitarihana ho an'ny zanakao. Mandra-pahatongan'ny taonan'ny 18, farafaharatsiny, tompon'andraikitra amin'ny fiadanany ianao. Ity torolàlana an'ny ray aman-dreny ity amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia hanampy anao hatoky tena ampy hanana ireo resaka sarotra ireo. Mianara momba ny fiatraikan'ny pôrnôgrafia, ny fiatraikany ara-batana ary ny voka-dratsin'ny pôrnôgrafia. Ity fahalalana ity dia hahafahanao miaro ny zanakao amin'ireo haratsiana isan-karazany izay efa fantatry ny mpitsabo sy ireo mpampiasa taloha an'arivony. Ampidirinay ny fizarana momba ny sexting sy ny fiantraikan'ny lalàna ho anao sy ny zanakao.
Mandritra ny areti-mandringana, ny fahasosorana dia hahafahan'ny ankizy maro kokoa tsy nahy na famolavolana hihaona amin'ny famoahana sary vetaveta mahery. Raha tsy mampianatra ny tenanao ianao, ary avy eo ny zanakao, momba ny vokany mety hitranga amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, dia misy ny loza mety hitranga amin'ny zanakao amin'ny resaka vetaveta amin'ny ho avy. Miala tsiny fa ratsy, fa fizahana zava-misy io. Ny tanora no mora tratran'ny olana ara-pahasalamana sy fiankinan-doha rehefa mandeha ny fotoana. Ity misy tsara video fohy avy amin'ny mpitsabo aretin-tsaina iray momba ny trauma izay miresaka momba ny fiatrehana ny areti-mandringana.
Fikarohana avy amin'ny British Class of Film Classification
Araka izany fikarohana manomboka amin'ny taona 2019, ireo ankizy vao 7 ka hatramin'ny 8 taona dia tafintohina amin'ny sary vetaveta mafy. Miisa 2,344 ny ray aman-dreny sy ny tanora nandray anjara tamin'ity fikarohana ity.
Ny ankamaroan'ny tanora voalohany mijery sary vetaveta dia tsy nahy, miaraka amin'ny 60% -n'ny ankizy 11-13 izay nahita pôrnôgrafia nilaza fa tsy fanahy iniana ny fijerena sary vetaveta.
Ny ankizy dia nilazalaza ny fahatsapana ho "tototra" sy "misavoritaka", indrindra ireo izay efa nahita sary vetaveta fony izy ireo 10 taona.
Maherin'ny antsasaky (51%) an'ny zaza 11 ka hatramin'ny 13 taona no nitatitra fa nahita pôrnôgrafia tamin'ny fotoana sasany, tafakatra 66% amin'ny ankizy 14-15 taona.
Ny 83% -n'ny ray aman-dreny dia nanaiky fa ny fanaraha-maso fanamarinana taona dia tokony hapetraka amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet
Ny tatitra dia naneho ihany koa ny tsy fitoviana eo amin'ny fomba fijerin'ny ray aman-dreny sy ny zavatra tena iainan'ny ankizy. Telo ampahefatra (75%) ny ray aman-dreny no nahatsapa fa tsy hahita sary vetaveta amin'ny Internet ny zanany. Fa ny zanak'izy ireo, maherin'ny antsasaky ny (53%) no nilaza fa nahita izany izy ireo.
David Austin, Lehiben'ny Executive an'ny BBFC, dia nilaza hoe: "Ny pôrnôgrafia dia iray monja amin'ny tsindry iray ho an'ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra any UK, ary ity fikarohana ity dia manohana ny porofo mitombo fa misy fiatraikany amin'ny fomba fahazoan'ny tanora fifandraisana tsara, firaisana ara-nofo, sary sy fanekena vatana. Asehon'ny fikarohana ihany koa fa raha ny ankizy kely - amin'ny tranga sasany hatramin'ny fito na valo taona - dia mijery pôrnôgrafia amin'ny Internet voalohany, matetika dia tsy fanahy iniana izany. ”
Ny ankamaroan'ny ankizy sy ny ray aman-dreny tafatafa dia nino fa ny fanamarinana taona dia hanakana ny ankizy tsy hahita sary vetaveta amin'ny fahatanorana, ary mety hampihemotra ny taona ahatongavan'izy ireo amin'izany.
Ny 83% amin'ireo ray aman-dreny nanaovana fanadihadiana dia nanaiky fa tokony hisy fanaraha-maso fanamarinana taona ho an'ny pôrnôn'ny Internet. Nasehon'ny fikarohana ihany koa fa maniry fanamarinana taona ny tanora - hevitra marim-pototra ny 47% -n'ny ankizy, miaraka amin'ireo tanora 11-13 taona kokoa noho ireo tanora antitra.
Ny fahazarana mamoa fady dia mety hiteraka vokany manaraka:
miala amin'ny hetsika sosialy
mamorona fiainana miafina
mandainga sy mamitaka ny hafa
lasa tia tena
mifidy ny sary vetaveta mihoatra ny olona
mora tezitra rehefa tsy afaka miditra amin'ny pôrnôgrafia
mahatsiaro tena tezitra sy kivy be
ny tebiteby sy ny tahotra
mahatsiaro tena tsy matanjaka amin'ny resaka porno
Manavakavaka olona hafa
mitsabo olona ho zavatra firaisana
ny fitsarana ny olona indrindra amin'ny lafiny vatany
ny tsy fanajana ny filan'ny olon-kafa ho an'ny fiainana manokana sy ny fiarovana
tsy miraikitra amin'ny fitondran-tena manimba
Miditra amin'ny fihetsika mampidi-doza sy mampidi-doza
fidirana amin'ny pôrnôgrafia any am-piasana na any am-pianarana
fidirana amin'ny sary manararaotra ny ankizy
mandray anjara amin'ny firaisana mahamenatra, manararaotra, mahery setra, na manao firaisana ara-nofo
mamokatra, mizara na mivarotra pôrnôgrafia
manao firaisana ara-nofo tsy azo antoka sy manimba
Mpiara-miasa tsy sambatra
Ny fifandraisana dia simba noho ny tsy fahatokisana sy ny fitaka momba ny fampiasana porno
ny mpiara-miasa dia mihevitra ny pôrnôgrafia ho toy ny tsy mpino, izany hoe "mamitaka"
miharatsy sy tezitra ny mpiara-miasa
miharatsy ny fifandraisana noho ny tsy fahatokisan-tena sy ny fifanajana
ny mpiara-miahy dia miahy ny hahasoa ny ankizy
ny mpiara-miasa mahatsapa tsy mahavita firaisana ara-nofo ary atahorana amin'ny sary vetaveta
ny fahaverezan'ny fihetseham-po sy ny fahafinaretana ara-nofo
fahaverezan'ny fahalianana amin'ny firaisana amin'ny tena mpiara-miasa
fahasarotana ho lasa mifoha sy / na hahatratra orgasm tsy misy porno
eritreritra maneso, nofinofy ary sarin'ny sary mamoafady mandritra ny firaisana ara-nofo
manjary mitaky firaisana ara-nofo ary na mifanohitra amin'ny firaisana ara-nofo
sahirana amin'ny fampitana ny fitiavana sy ny fikarakarana firaisana
mahatsiaro ho tsy voafehy intsony ary manery
nitombo ny fahalianana amin'ny fanaovana risika, manambany, manararaotra ary / na firaisana ara-dalàna tsy ara-dalàna
mitombo tsy fahafaham-po amin'ny firaisana ara-nofo
kilema ara-pananahana - tsy fahaiza-manaon'ny orgasme, épirement miharatsy, famorontanana erectile
nahatsapa fa tsy voafehin'ny soatoavin'ny olona, ​​finoana ary tanjona
fahaverezan'ny fahatokisan-tena manokana
simba ny fahatokisan-tena
fahatsapana ho meloka sy henatra
fahatsapana fehezin'ny porno
Ny fanaovana tsirambina ny faritra lehibe amin'ny fiainana
fahasalaman'ny tena manokana (famoizana ny torimaso, harerahana ary tsy fikarakarana tena)
fiainam-pianakaviana (tsy miraharaha mpiara-miombon'antoka, ny ankizy, ny biby fiompy ary ny andraikitra ao an-tokantrano)
fitadiavana asa sy fianarana any an-tsekoly (miverina mifantoka, mamokatra, ary fandrosoana)
fitantanam-bola (fandaniana amin'ny loharano vetaveta)
ara-panahy (fanavahana amin'ny finoana sy fanao ara-panahy)
Fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia
mitsiry mafy ny sary vetaveta
fahasarotana mifehy ny eritreritra, na fanelezana, ary fampiasana sary vetaveta
tsy fahaizana manakana ny fampiasana pôrnôgrafia na dia eo aza ny voka-dratsy
ny tsy fahombiazana imbetsaka hampiato ny fampiasana sary vetaveta
mitaky votoaty tafahoatra na fampisehoana tafahoatra amin'ny pôrnôgrafia mba hahazoana vokatra mitovy (soritr'aretina habituation)
mahatsapa fahasosorana sy fahasosorana rehefa esorina amin'ny pôrnôgrafia (sorisain'ny fisintonana)
Ny lisitra etsy ambony dia namboarina avy amin'ny boky "The Porn Trap”Nataon'i Wendy Malz. Raha ny ankamaroan'ireo dia mifandraika amin'ny tanora antitra sy tanora efa lehibe, ny sasany kosa dia efa za-draharaha amin'ny ankizy.
Manodidina ny fahamaotiana ny ankizy dia manomboka liana amin'ny resaka firaisana ara-nofo ny ankizy ary te hianatra faran'izay betsaka momba izany. Nahoana? Satria ny laharam-pahamehana voalohany amin'ny natiora dia ny fiterahana, ny fizarana ny fototarazo. Ary voalamina hiompana amin'izany isika, vonona na tsia. Ny Internet no toerana voalohany manomboka mitady valiny ny ankizy.
Ny fidirana amin'ny pôrnôgrafia maimaim-poana, streaming, hardcore dia iray amin'ireo andrana ara-tsosialy lehibe sy tsy voarindra izay nivoaka tao amin'ny tantara. Manampy ireo fitondran-tena mampidi-doza vaovao amin'ny ati-doha efa mitady risika izany. Jereo ity horonantsary fohy ity raha te hahalala bebe kokoa momba ny adolescent adolescent miaraka amin'ny torohevitra ho an'ny ray aman-dreny avy amin'ny neuroscientist.
Tian'ny zazalahy mampiasa tranonkala vetaveta mihoatra ny ankizivavy, sy ny ankizivavy tia ny tranonkala media sosialy ary liana amin'ny tantara erotika, toy ny 50 Shades of Grey. Mampidi-doza izany ho an'ny zazavavy. Ohatra, nahare momba ny zazavavy kely iray 9 taona izahay, izay nandefa sy namaky sary vetaveta tao amin'ny Kindle. Izany dia na teo aza ny reniny nametraka fameperana sy fifehezana ireo fitaovana hafa rehetra azony alehany, fa tsy Kindle.
Tanora maro no milaza fa maniry ny ray aman-dreniny ho mavitrika kokoa amin'ny firesahana sary vetaveta amin'izy ireo. Raha tsy afaka mangataka vonjy aminao izy ireo, dia ho aiza izy ireo?
Tranonkala lehibe sy malaza indrindra Pornhub mampiroborobo ny horonantsary mamokatra ahiahy toy ny porno amin'ny fampiroboroboana, famoretana, fampijaliana, fanolanana ary gangbangs. Ny Incest dia iray amin'ireo karazan-javatra mitombo haingana indrindra araky ny Pornhubny tatitry ny tenany. Maimaimpoana ary mora idirana ny ankamaroany. Pornhub dia mihevitra ny areti-mandringana ho toy ny fotoana mety hanararaotana mampiasa mpampiasa bebe kokoa ary manome fidirana maimaimpoana amin'ireo tranokala premium (mazàna aloa) any amin'ny firenena rehetra.
Raha manan-janaka voamarina fa eo amin'ny sehatry ny autisme ianao dia mila mailo fa ny zanakao dia mety hampidi-doza kokoa noho izy mahazo sary vetaveta noho ny ankizy neurotypical. Raha miahiahy ianao fa ny zanakao dia eo an-tsekoly, mety tsara raha manana azy ianao fanombanana raha azo atao. Ireo tovolahy manokana miaraka amin'ny ASD na ny filàna fianarana manokana dia tsy voatanisa ao anatin'ny antontan'isa noho ny fanitsakitsahana ara-nofo. Misy fiantraikany farafaharatsiny Olona 1-2% amin'ny mponina amin'ny ankapobeny, ny fambara marina dia tsy fantatra, nefa mihoatra noho izany 30% amin'ireo meloka amin'ny firaisana ara-nofo dia eo amin'ny habakabaka na manana fahasarotana mianatra. Ity misy a taratasy vaovao momba ny zavatra niainan'ny tovolahy iray. Mifandraisa aminay hahazoana fidirana amin'ny taratasy raha ilaina izany.
Ny aretin-kozatra autisme dia toetran'ny neurolojia hatramin'ny nahaterahany. Tsy aretin-tsaina io. Na dia aretina mahazatra kokoa eo amin'ny lahy aza izany, 5: 1, ny vehivavy dia afaka manana izany koa. Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ireo bilaogy ireo pelaka sy autisme; tantaran'ny reny; ary autism: tena na fo?
Ity minitra 2 ity, mamiratra fanentanana manome topy maso haingana ary manohana ny filana maika ny fampiharana ny lalàna fanamarinana taona hiarovana ny ankizy. Azonao aseho amin'ny zanakao izany satria tsy misy sary vetaveta. Azonao atao ihany koa ny manoratra amin'ny solombavambahoakao na aiza na aiza misy anao ary mangataka amin'ny governemanta hametraka lalàna hamorona lalàna fanamarinana taona hiarovana ny zanakao amin'ny Internet.
Ity minitra 5 ity Video dia amboarana avy amin'ny fanadihadiana iray avy any Nouvelle-Zélande. Ao dia manazava ny fizotry ny pôrnôgrafia ao amin'ny atidoha ny neurosurgeon ary mampiseho ny fitoviana amin'ny fiankinan-dohazy.
Amin'ity resaka TEDx ity "Firaisana ara-nofo, pôrnôgrafia ary maha-lehilahy", Profesora Warren Binford, miresaka amin'ny maha reny sy mpampianatra voakasik'izany, dia manome topimaso tsara momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny ankizy. Ity resaka TEDx nataon'ny Profesora Gail Dines ity dia “Niroborobo tamin'ny kolontsaina vetaveta”(13 min) dia manazava amin'ny fomba mazava ny fomba famolavolana horonantsary mozika, tranonkala vetaveta ary media sosialy ny firaisana ara-nofo ataon'ny zanatsika ankehitriny.
Ity misy resaka TEDx mahatsikaiky (16 min) antsoina hoe “Ny fomba fijerin'ny horonantsary ny firaisana ara-nofo”Avy amina reny amerikanina sy mpanabe momba ny lahy sy ny vavy Cindy Pierce. Ny torolalan'ny ray aman-dreniny dia milaza fa ny resaka mitohy miaraka amin'ny zanakao momba ny pôrnôgrafia dia tena ilaina ary inona no mahaliana azy ireo. Jereo eto ambany raha mila loharano misimisy momba ny fomba hanaovana ireo resaka ireo.
Ny zaza mbola kely enina dia miditra amin'ny pôrnôgrafia mavesatra. Ny ankizy sasany dia talanjona sy mazoto mitady bebe kokoa, ny hafa kosa mijaly ary manana mofomamy. Hardcore lehibe olon-dehibe dia tsy mety ho an'ny ankizy na firy taona noho ny fivoaran'ny atidoha. Ity misy a tatitra nohavaozina tamin'ny taona 2017 nantsoina hoe “… Tsy fantatro fa ara-dalàna ny mijery…” fanadihadiana tamina kalitao sy habetsaky ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny soatoavina, toetra, finoana ary fitondran-tenan'ny ankizy sy ny tanora. ” Avy amin'ny Middlesex University avy amin'ny NSPCC sy ny Komisiona ho an'ny ankizy any Angletera sy Wales.
Fantaro fa sarotra ny mifehy tena amin'ny tanora. Ity dia resaka TEDx tsara antsoina Ny hafanan'ny fotoana: ny vokatry ny firaisana ara-nofo amin'ny fanaovana fanapahan-kevitra momba ny firaisana.
Manoro hevitra tanteraka izahay hijery ity horonantsary vaovao ity. Ianao dia afaka jereo ny tranofiara maimaimpoana ao amin'ny Vimeo. Izy io dia raki-tsary nataon'ireo ray aman-dreny, izay tonga sary mihetsika, ho an'ny ray aman-dreny. Izany no tena fijerena tsara indrindra momba ilay olana hitantsika ary manana ohatra lehibe amin'ny fomba hanaovana ireo resaka madinidinika ireo amin'ny zanakao.
Ny fijerena ilay horonantsary ifotony dia mitentina £ 4.99 fotsiny ary io no vola laniana tsara indrindra azonao antenaina. (Tsy mahazo vola amin'izany tolo-kevitra izany izahay.) Betsaka amin'ireo manam-pahaizana sy loharanom-pahalalana izay atolotray ao amin'ny bokin'ity ray aman-dreny ity no hita ao amin'ny fanadihadiana ihany koa. Rob sy Zareen dia nametraka ny volany sy ny fahaizany rehetra amin'ny fanaovana izany ho serivisy ho an'ny ray aman-dreny hafa, koa mba ividio azafady raha azonao atao. Misaotra. Raha tsy te handany vola ianao dia misy horonan-tsary tsara hafa etsy ambany azo maimaimpoana.
“Aza manome tsiny sy menatra” zaza iray mijery horonan-tsary. Na aiza na aiza an-tserasera dia mivoaka ao amin'ny media sosialy sy amin'ireo horonan-tsary mozika. Mety ho sarotra ny misoroka azy. Ny ankizy hafa mampita izany amin'ny fihomehezana na ny bravado, na ny zanakao mety tafintohina eny. Mety ho mazava ho azy ireo hikatsaka izany koa. Ny fandrarana ny zanakao tsy hijery azy fotsiny dia vao maika mampihetsi-po kokoa, satria arak'izay voalaza taloha. 'Ny voankazo voarara no mamy indrindra'.
Tazomy ny andalana fifandraisana mivelatra mba ho ianao no vavahadim-pifandraisana voalohany hiresahana ireo olana manodidina ny pôrnônôma. Ny ankizy dia liana amin'ny resaka firaisana ara-nofo hatramin'ny fahatanorana. Ny pôrnika an-tserasera dia tahaka ny fomba mahafinaritra hianatra ny fomba tsara ny manao firaisana ara-nofo. Manokàna ary maha-marina ny fihetseham-ponao momba ny pôrnôgrafia. Eritrereto ny filazanao ny mijery sary vetaveta amin'ny maha-tanora anao, na dia mahatsiaro ho tsy mahazo aina aza izany.
Tsy mila resaka lehibe momba ny firaisana ny ankizy. izy ireo mila adihevitra maro rehefa mandeha ny fotoana arakaraka ny nandalovan'izy ireo taona. Ny tsirairay dia tokony ho mifanaraka amin'ny taona, mangataka fanampiana raha mila izany. Ray sy reny reny samy mila mandray anjara amin'ny fanabeazana ny tenany sy ny zanany momba ny fiantraikan'ny teknolojia ankehitriny.
Miady amin'ny hetsi-panoherana: Mety hanao hetsi-panoherana ny ankizy amin'ny voalohany, saingy maro ny ankizy no nilaza taminay fa tian'izy ireo ny hametrahan'ny ray aman-dreny ny vavahady ary hanome azy ireo fetra mazava. Tsy manao sitraka amin'ny zanakao ianao amin'ny famelana azy ireo 'ara-bakiteny' amin'ny fitaovana ampiasainy.
Aza mahatsiaro tena ho meloka noho ny fandraisana andraikitra amin'ny zanakao. Ny fahasalamany ara-tsaina sy ny fahasalamana dia tena eo an-tananao. Ampirimo amin'ny fahalalana sy ny fo misokatra hanampiana ny zanakao hizaha ity vanim-potoanan'ny fanamboarana ity. Inty toro-hevitra avy amin'ny dokotera ankizy iray.
Recent fikarohana milaza fa ny sivana fotsiny dia tsy hiaro ny zanakao tsy hiditra amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Ny torolalan'ity ray aman-dreny ity dia manantitrantitra ny filàna hihazonana ny lalan'ny fifandraisana ho zava-dehibe kokoa. Ny fanamafisana ny fanaovana sary vetaveta dia fanombohana tsara foana indrindra indrindra amin'ireo ankizy kely. Ilaina ny mametraka azy sivana amin'ny fitaovana internet rehetra sy fanamarinana eo amin'ny miorina tsy tapaka fa miasa izy ireo. Hamarino amin'ny Childline na ny mpanome Internet momba ny torohevitra farany momba ny sivana.
Profesora sosiolojia teo aloha, mpanoratra sy reniny, Dr Gail Dines, no mpanorina ny Culture Reframed. Jereo ny lahateniny TEDx “Niroborobo tamin'ny kolontsaina vetaveta”(13 min). Izy sy ny ekipany dia namolavola fitaovana maimaimpoana fanao tsara indrindra izay hanampy ny ray aman-dreny hitaiza ankizy mahatoky pôrnôgrafia. Ahoana ny fomba hanaovana ilay resaka: jereo ny Ny programan'ny ray aman-dreny fandrakofana kolontsaina.
Boky vaovao nosoratan'i Colette Smart, renim-pianakaviana, mpampianatra sy psikolojia taloha antsoina hoe “Ho Ok izy ireo". Ilay boky dia misy ohatra 15 amin'ny resadresaka azonao atao amin'ny zanakao. Ilay tranonkala dia manana mpandinika fahita fahita fahita amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny mpanoratra mizara hevitra sasantsasany ihany koa.
Fahaverezana manome ny smartphone na tablety ny zanakao raha mbola azo atao. Ny telefaona finday dia midika fa afaka mifandray foana ianao. Na dia mety ho valisoa aza izany amin'ny fiasanao mafy amin'ny ambaratonga voalohany na fanabeazana fototra hanoloranao finday finday avo lenta amin'ny fidirana amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ny zanakao, jereo izay ataony amin'ny fanatontosana akademika azy amin'ireo volana manaraka. Tena mila fidirana Internet 24 ora isan'andro ve ny ankizy? Na dia mety hahazo be dia be aza ny enta-mavesatra an-tserasera amin'ny Internet, azo ferana 60 minitra isan'andro ve ny fampiasana fialamboly, na dia fanandramana aza izany? Misy maro ireo apps mba hanara-maso ny fampiasana Internet ho an'ny fikolokoloana. Ny ankizy 2 taona sy ambany dia tsy tokony hijery sary.
Alefaso ny aterineto amin'ny alina. Na, farafaharatsiny, esory ny finday rehetra, ny takelaka ary ny fitaovana filalaovana ao amin'ny efitranon'ny zanakao. Ny tsy fahampian'ny torimaso famerenana amin'ny laoniny dia mampitombo ny adin-tsaina, ny fahaketrahana ary ny fanahiana amin'ny ankizy maro ankehitriny. Mila fatoriana mandritra ny alina tontolo izy ireo, adiny valo farafaharatsiny, hanampiana azy ireo hampifangaro ny fianana amin'ny andro, hanampiana azy ireo hitombo, hahatsapa ny fihetsem-pony ary hahatsapa tsara.
Ampahafantaro ny zanakao izany Ny pôrnôgrafika dia namorona dolara maromaro tech company amin'ny mpampiasa "hook" tsy misy ny fahatsiarovan'izy ireo mamorona fahazarana izay mitazona azy ireo hiverina bebe kokoa. Ny hitazomana ny sain'izy ireo hatrany. Ny orinasa dia mivarotra sy mizara fampahalalana akaiky momba ny filan'ny mpampiasa sy ny fahazarany amin'ny antoko fahatelo sy ny mpanao dokam-barotra. Natao hanandevozana toy ny lalao an-tserasera, filokana ary haino aman-jery sosialy izany mba hiverenan'ireo mpampiasa azy bebe kokoa raha vao mankaleo na mitebiteby izy ireo.
Betsaka ny rindrambaiko sy safidy fanohanana. Ikydz dia fampiharana ahafahan'ny ray aman-dreny manara-maso ny fampiasan'ny zanany. Gallery Guardian mampandre ny ray aman-dreny rehefa misy sary mampiahiahy miseho amin'ny fitaovan'ny zanany. Izy io dia miatrika ny loza ateraky ny sexting.
fotoana dia free app izay mamela ny olona iray hanara-maso ny fampiasana azy an-tserasera, hametra fetra ary hahazo nudges rehefa mahatratra ireo fetra ireo. Ireo mpampiasa dia manana fironana hanamora ny fampiasana azy ireo amin'ny sisiny lehibe. Ity fampiharana ity dia mitovy fa tsy maimaim-poana. Manampy ny olona hamerina ny atidohany izany amin'ny fanampiana eny an-dàlana. Antsoina hoe Brainbuddy.
Ireto misy programa hafa mety ho ilaina: Maso fanekena; hodi-kazo; NetNanny; Mobicip; Qustodio Fanaraha-maso ny ray aman-dreny; WebWatcher; Norton Family Premiere; OpenDNS Home VIP; PureSight Multi. Ny fisehoan'ny programa ato amin'ity lisitra ity dia tsy fanamafisana avy amin'ny The Reward Foundation. Tsy mahazo tombony ara-bola amin'ny fivarotana an'ireto fampiharana ireto izahay.
Ny boky tsara indrindra eny an-tsena dia ny tompon'andraikitra mpikaroka manan-kaja Gary Wilson. Hilaza izany izahay, saingy marina izany. Antsoina hoe “Ny atidohanao amin'ny pôrnô: Pornografie amin'ny Internet ary ny firoboroboan'ny fiankinan-doha". Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny lehibe koa izy io. Omeo ny zanakao hamaky izany satria misy tantara an-jatony nataon'ny tanora hafa sy ny tolona ataon'izy ireo amin'ny pôrnôgrafia. Betsaka no nanomboka nijery sary vetaveta tamin'ny fahatanorany.
Gary dia mpampianatra siansa tena tsara izay manazava ny valim-pitiavan'ny atidoha, na ny antony manosika ny rafi-pandaminana amin'ny fomba tena azo idirana ho an'ny tsy siantifika. Fanavaozana momba ny malaza ny boky TEDx resaka avy amin'ny 2012.
Ny boky dia azo alaina amin'ny paperback, amin'ny Kindle na amin'ny audiobook. Raha ny marina dia azo alaina MAIMAIMPOANA ny kinova am-peo any Angletera Eto, ary ho an'ny olona any Etazonia, Eto. Nohavaozina izy io tamin'ny Oktobra 2018 mba handraisana ny faneken'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny sokajy diagnostika vaovao “Diso fitondran-tena momba ny filan'ny nofo". Ny fandikana dia misy amin'ny fiteny holandey, arabo ary hongroà hatreto, miaraka amin'ny hafa ao amin'ny fantsona.
Ny dokotera ankizy dokotera Dr Victoria Dunckley dia ny boky "Avereno ny atidohan'ny zanakao"Ary ny fahalalahana azy bilaogy hazavao ny vokatry ny fotoana be loatra amin'ny efijery amin'ny ati-dohan'ilay zaza. Zava-dehibe izany dia mametraka drafitra momba izay azon'ny ray aman-dreny atao mba hanampiana ny zanany hiverina amin'ny làlan-kaleha indray.
Tsy maningana ny fampiasana sary vetaveta i Dr Dunckley fa mifantoka amin'ny fampiasana Internet amin'ny ankapobeny. Nilaza izy fa manodidina ny 80% amin'ireo zaza hitany no tsy manana aretina ara-tsaina nahazo azy ireo ary notsaboina, toy ny ADHD, aretin'ny bipolar, fahaketrahana, fitaintainanana sns, fa kosa manana ilay antsoiny hoe 'écran écran électronique. ' Ity syndrome ity dia manahaka ny soritr'aretin'ny maro amin'ireo aretina ara-pahasalamana mahazatra ireo. Ny olana ara-pahasalamana dia azo sitranina / ahena matetika amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo fitaovana elektronika mandritra ny 3 herinandro eo ho eo amin'ny ankamaroan'ny tranga, mila fotoana lava kokoa ny ankizy sasany alohan'ny hanombohany hampiasa indray nefa amin'ny ambaratonga voafetra kokoa.
Ny bokiny koa dia manazava ny fomba ahafahan'ny ray aman-dreny manao izany amin'ny torolàlana ray aman-dreny tsikelikely amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sekolin-janany mba hiantohana ny fiaraha-miasa tsara indrindra amin'ny lafiny roa.
Boky ho an'ny ankizy madinika
"Misokatra ny boaty an'i Pandora. Ary inona izao no ataoko? " Gail Poyner dia psychologista ary manome fampahalalana momba ny atidoha mahasoa sy fampiharana mora atao hanampiana ny ankizy hieritreritra amin'ny safidy.
"Good Pictures, Bad Pictures"Avy amin'i Kristen Jensen sy Gail Poyner. Misy boky tsara mifantoka amin'ny ati-doha.
Tsy ho an'ny ankizy. Miaro ny ankizy. Liz Walker dia nanoratra boky tsotra ho an'ny ankizy kely manana sary manintona.
Hamish sy ny tsiambaratelo Ity dia boky vaovao nosoratan'i Liz Walker ho an'ny ankizy 8-12 taona.
Mianara momba ny fahasalamana, araka ny lalàna, fanabeazana ary fifandraisana ny fiantraikan'ny sary vetaveta amin'ny Ny valin'ny Fanamarinana tranonkala miaraka amin'ny torohevitra amin'ny hiala.
Jereo hoe ahoana ny Ny programan'ny ray aman-dreny fandrakofana kolontsaina manampy ny ray aman-dreny hiatrika ny fiovana ara-kolontsaina ankehitriny sy ny fiantraikany amin'ny ankizy.
Fahatakarana ny mety ho fanamby amin'ny fanatanjahan-tena fahafehezan-tena. Lahatsary mampihomehy nataon'ny psikology ambony.
Fisorohana fitondran-tena manimba amin'ny mpampiasa Toolkit avy amin'ny Lucy Faithfull Foundation.
Toro-hevitra mahaleotena avy amin'ny fiantohana ny fanararaotana zaza tsy ampy taona Stop It Now! Miaro ny ray aman-dreny
Miadia amin'ny zava-mahadomelina vaovao Ahoana ny fomba hiresahana amin'ny zanakao momba ny sary vetaveta.
Ity dia zava-baovao iray vaovao tatitra avy amin'ny Internet Matters amin'ny fiarovana ny aterineto sy ny fanaovana pirinty nomerika miaraka amin'ny toro-hevitra momba ny fomba hitazonana ny zanakao ho voaro rehefa mikaroka ny harato.
Toro-hevitra avy amin'ny NSPCC momba ny pôrnôgrafia amin'ny Internet.
Ny ankamaroan'ny tranonkala fanasitranana malalaka toy ny yourbrainonporn.com; RebootNation.org; PornHelp; NoFap.com; Fightthenewdrug.org; Mandehana amin'ny fahamendrehana ary Nalefa amin'ny Internet Porn tsy miankina nefa manana mpampiasa ara-pivavahana koa. Mahasoa ny ray aman-dreny mba hahitana raha te hahita ny zavatra niainan'ireo olona sitrana ary efa miatrika izany rehefa mifanaraka izy ireo.
Ireo loharanon-kevitra mifototra amin'ny finoana
Misy loharanom-pitaovana tsara koa ho an'ny fiarahamonina mifototra amin'ny finoana toy ny Fahatokiana naverina amin'ny laoniny ho an'ny Katolika, ho an'ny kristiana amin'ny ankapobeny Tetikasa miboridana miboridana (UK) Hoatran'ny Porn Harms (Etazonia), ary MuslimMatters ho an'ny finoana Islamika. Azafady mba mifandraisa aminay raha misy tetikasa miorina amin'ny finoana azontsika atao sonia.
Ny fampiasana matetika ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ataon'ny ankizy dia mamolavola ny ati-dohan'ilay zaza, ny môdely mampientanentana azy ireo. Misy fiantraikany lehibe amin'ny sexting sy cyberbullying izany. Ny ahiahy ho an'ny ray aman-dreny dia mety ho ny fiatraikany ara-dalàna amin'ny zanany mamorona sary vetaveta manahirana ka miteraka fihetsika mamoa fady amin'ny hafa. izany pejy avy amin'ny vondrona Expert notendren'ny governemanta Scottish ho amin'ny fitondran-tena manimba eo amin'ny ankizy dia manome ohatra ny fihetsika toy izany. Jereo koa eto raha mila fampahalalana lehibe momba ny sexting, valifaty valifaty sns izay enjehin'ny polisy hatrany. Sexting tany Ekosy. Sekta amin'ny Angletera, Wales ary Irlandy Avaratra.
Jereo ny fisorohana ny fiantrana ny ankizy amin'ny fanararaotana zaza tsy ampy taona ataon'ny Lucy Faithfull Foundation Toolkit natokana ho an'ny ray aman-dreny, mpikarakara, mpianakavy ary matihanina. Ny Reward Foundation dia voatonona ho loharanom-panampiana.
Any Angletera, ny polisy dia mitaky ny fanamarihana ny trangana sexting rehetra ao amin'ny rafitry ny Criminal History. Raha tratry ny sary maloto ny zanakao ary nanery an-tsokosoko tamin'ny fahazoana azy ireo na nampita izany tamin'ny hafa, dia mety voampangain'ny polisy izy. Satria ny heloka bevava ara-nofo dia heverin'ny polisy ho matotra tokoa, io fandikan-dalàna an-tsokosoko io, izay voarakitra ao amin'ny rafitry ny tantaran'ny heloka bevava nataon'ny polisy, dia ampitaina amin'ny mpampiasa ho avy iray rehefa angatahana fanaraha-maso fanatsarana ny asa miaraka amin'ireo olona marefo. Anisan'izany ny asa an-tsitrapo.
Ny sexting dia toa endrika tsy mampidi-doza amin'ny filalaovana fitia, fa raha mahery setra na manery azy io, ny vokany dia mety hisy vokany maharitra kokoa amin'ny ho avin'ny zanakao asa. Ny pôrnôgrafia mahazatra dia mampiasa modely faneriterena.
Ny governemanta UK dia nahemotra (tsy nofoanana) ny fijoroany amin'ny fiarovana ny ankizy amin'ny Internet. Jereo ity taratasy avy amin'ny minisitry ny governemanta ho an'ny sekretera ny fiaraha-miombon'antoka ny asa soa ho an'ny ankizy momba ny fiarovana ny Internet. Ny tanjon'ny lalàna fanamarinana taona (Digital Economy Act, Fizarana 3) dia ny hahatonga ireo orinasan-tsary mamoa fady hametraka rindrambaiko fanamarinana taona mahomby kokoa hamerana ny fahazoana miditra amin'ireo latsaky ny 18 taona amin'ny tranokala fanaovana sary vetaveta. Jereo ity bilaogy momba izany raha mila fanazavana fanampiny. Ireo fitsipika vaovao dia mikasa ny hampiditra tranokala media sosialy ary koa tranokala pôrnôgrafika ara-barotra ambanin'ilay vaovao Volavolan-dalàna momba ny fanararaotana an-tserasera saingy tsy antenaina ho vonona izany mandra-pahatongan'ny 2023-24. Hametraka adidy hikarakara izany. Tadidio fa afaka manoratra amin'ny mpikambana ao amin'ny Parlemantao ianao na aiza na aiza misy anao ary mangataka amin'ny governemanta hamoaka lalàna fanamarinana taona hiarovana ny zanakao amin'ny Internet. Adidiny ny miaro ireo marefo indrindra amin'ny fiarahamonina.
Azafady mba mifandraisa aminay Raha misy faritra tianao tazonina amin'ity resaka ity. Hisy fampiroboroboana bebe kokoa amin'ny tranokalanay mandritra ny volana ho avy. Mifandraisa amin'ny vaovao e-Newsletter an'ny Vaovao mahafaly (eo an-tongotra pejy) ary araho amin'ny Twitter (@brain_love_sex) ho an'ny fivoarana farany.
Ny Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny dia nohavaozina farany tamin'ny 13 Janoary 2021